Geese - ठूलो उत्पादक कुखुरा, वजन वयस्क छ 7-8 किलो, हांस कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग 15 देखि एक वयस्क देखि 150-220 ग्राम वजन मासु छ किलो, बोसो एक मूल्यवान को 500 ग्राम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ 60 वा बढी अन्डा गर्न, सक्रिय चिकित्सा प्रयोग गरिन्छ र औषध, धेरै कम कोलेस्ट्रल संग, र विशेष fattening मा - डेली कलेजो 700 ग्राम सम्म वजन .. द कलहंस - मात्र चरा प्रजाति, तपाईं तल उच्च गुणवत्ता र पंख को जीवनकालमा प्राप्त गर्न सक्छन् जो देखि, दुई पटक राम्रो स्थायित्व चिकन छन् जो। Goose जवान बढ्दै छिटो goslings 40 भन्दा बढी पटक वृद्धि पहिलो दुई खेती को महिना मा वजन बाँचिरहेका छौं। Geese पूर्ण चराई प्रयोग गर्नुहोस्, र कुनै पनि चरा को अभाव मा हरियो गर्न खुवाउनुभयो गर्न सकिन्छ। को चरा प्रकार निर्णय गरेको छ गर्नेहरूका लागि बहुमूल्य गुणहरू - उच्च उत्पादकत्व, सामग्री को मामला मा सरलता, फाइबर को एक उच्च स्तर संग roughage उपभोग गर्ने क्षमता।
जैविक र आर्थिक सुविधाहरू
Geese कुखुरा अन्य प्रजाति तिनीहरूलाई छुट्याउन केही जैविक र आर्थिक सुविधाहरू छन्:
· को चरण प्रयोग र फाइबर को एक उच्च सामग्री संग हरियो succulent फिड को एक महत्वपूर्ण राशि उपभोग गर्न सक्ने क्षमता;
· टिकाऊ, आर्थिक जायज प्रयोग गर्न (3 भन्दा बढी वर्ष) गर्ने क्षमता, 20-25 वर्ष को गर्दा जीवन। कुखुरा को अन्य प्रकार देखि एक विशिष्ट सुविधा पहिलो तुलनामा दोस्रो र तेस्रो वर्षमा अन्डा उत्पादन बढ्दै छ;
· जीवनको पहिलो दुई महिनामा युवा कलहंस एक धेरै उच्च वृद्धि ऊर्जा छ। यसबाहेक, विकास ऊर्जा पहिलो महिना मा 200 छ, दोस्रो - 96, तेस्रो - 17%। यो सुविधा जहाँ gusjat broilers उमेर9सप्ताह गर्न मासु अप हुर्किसकेका थिए जैविक जोडदार gusevodstve मा प्रयोग गरिन्छ;
· Goose पंख र तल विभिन्न लोच र बल, कम पानी अवशोषण र थर्मल चालकता, तिनीहरूलाई पंख-तल को उत्पादन को लागि एक मूल्यवान कच्चा माल बनाउन;
· माइनस 25-30 ° सी मा तापमान मा केहि छिन रहने ड्रप सहनु सक्नुहुन्छ बाक्लो र हांस पंख गर्न कारणले माथि 32-34 ° C तापमान हुर्काउन प्लस सामान्य अवस्थामा कलहंस र गिरावट wheezing गराउँछ, त्यसैले तातो गर्मी समय तिनीहरूले शेड वा reservoirs समावेश गर्नुपर्छ।
कलहंस को बेफाइदा समावेश:
· अपेक्षाकृत कम fecundity र अन्डा उत्पादन, संकीर्ण सेक्स अनुपात (1: 3)। कलहंस एक जोडी द्वारा 50-60 turkeys, त्यसपछि - - यदि मासु कुखुरा को एक जोडी turkeys को एक जोडी देखि 125-150 बचेराहरूलाई प्राप्त गर्न सक्छन् कुनै 30-40 भन्दा बढी goslings;
· को लास मा बोसो को एक उच्च प्रतिशत, वृद्ध तीन महिना र यसको सामग्री अधिक कारण क्युटेनियस बोसो र 10% कारण आन्तरिक गर्न 25-30% पुग्छ;
· अबेर यौन परिपक्वता (240-310 दिन)। प्रकाश नस्ल कलहंस भारी अघि बोल्ट शुरू गर्दै छन्;
· (30 जनावरहरूको% 60 देखि प्वाल) कोरल्ने लागि विस्तारित propensity;
· गुँड (40%) को बाहिर राखे अन्डा।
कलहंस को नस्ल र नस्ल समूह
भारी (मासु र चिल्लो लागेको), मध्यम (सजावटी) र प्रकाश (अन्डा): त्यहाँ चट्टानको तीन समूहहरू छन्। Kholmogorskaya, emdenskuyu, टूलूस, Landes, एक ठूलो खैरो - पहिलो सबै आधुनिक ठूलो जातिहरु सामेल छन्। प्रजाति को कलहंस को मासु बोसो को एक महत्वपूर्ण राशि समावेश गर्दछ। तिनीहरूलाई 600-800 को कलेजो ठूलो फैटी पनि छन् बाट, दोस्रो समूह टेप वा घुम्रेको Sebastopol कलहंस समावेश छ। तेस्रो समूह को प्रतिनिधिहरु चिनियाँ, KUBAN, एडलर, इटालियन छन्।
Kholmogory नस्ल केन्द्रीय काला धरती क्षेत्र को क्षेत्रमा नस्ल। यो राम्रो आर्थिक-उपयोगी संकेत संग कलहंस को पुरानो घरेलू नस्ल छ। यो चरा बलियो संविधान, हार्डी, राम्रो acclimated छ। किशोर र चरा वयस्क उच्च स्वयंसमर्थता छ। उमेर कलहंस को 60 दिन गहन fattening संग प्रति 1 किलो वृद्धि3किलो को एक लागत मा खाना को लगभग4किलो एक प्रत्यक्ष वजन पुग्न। Geese Kholmogory नस्ल देश को केन्द्रीय भाग भर नस्ल।
ठूलो खैरो रक को तामबोभ क्षेत्रमा टूलूस देखि Romny कलहंस पार गरेर सिर्जना गरियो। चयन शरीरको वजन र अन्डा उत्पादन वृद्धि को दिशा मा गरियो। गहिरो र व्यापक कलहंस को टोर्सो। पेशी आंकडा। युवा र वयस्क चरा को स्वयंसमर्थता राम्रो छ। उमेर 3.5-4.0 किलो 60 दिन को ठूलो कलहंस। incubate बढ्न र कलहंस, पानी गुणस्तर गर्न undemanding, राम्रो खुरचना र जब Pereyaslavskaya KUBAN, राइन र broiler लागि चिनियाँ gusjat संग क्रस बाबुको प्रकारका रूपमा प्रयोग अन्न-padalitsu.Krupnyh खैरो कलहंस खान राम्रो goose।
KUBAN नस्ल कुखुरा KUBAN राज्य Agrarian विश्वविद्यालय को विभाग को कर्मचारीहरु उत्पन्न। बर्ड यो नस्ल पर्यावरण अवस्था क्रास्नोडार क्षेत्र र बढ्दै जवान (95-97%) को लागि उच्च सुरक्षा र वयस्क जनसंख्याको सामग्री राम्रो adaptability छ। आम उमेर 3.5-3.7 किलो2महिना gusjat। चराई को Kubanskie कलहंस सदुपयोग र 150 ग्राम वजन उच्च अन्डा उत्पादन (अप गर्न 95-100 टुक्रा) छ
gusevodstve मा संकर संकर उत्पादन crossbreeding प्रयोग गर्न उचित। , Lind टूलूस कलहंस को ठूलो खैरो landshskih, उच्च वृद्धि दर भइरहेको - अभिभावक रक KUBAN, चिनियाँ, र इटालियन राइन एक उच्च प्रजनन, साथै बाबुको भइरहेको कलहंस प्रयोग गर्न एउटा expedient रूपमा।
कलहंस लागि कोठा, सफा सुक्खा, ड्राफ्ट बिना राम्रो ventilated हुनुपर्छ। ड्राफ्ट र dampness कुखुरा को उत्पादकत्व कम। तल्ला पृथक र, आवश्यक भएमा 15-20 सेमी द्वारा जमीन माथि उठाएर। यो पनरोक हुनुपर्छ र plastered र 20 प्रतिशत कागती मोर्टार संग उपचार कोठा पर्खालहरु मा मुसा रोक्न। तल्ला देखि 50 सेमी उचाई मा बनाएको विंडोज, तल्ला तहमा रोशनी 15 लक्स भन्दा कम हुनुपर्छ। कुखुरा घर ताप र वेंटिलेशन संग सुसज्जित हुनुपर्छ, अलग को संभावना को लागि प्रदान गर्न, यो सबै भन्दा राम्रो खण्डहरू मा विभाजन मेष छ। यस खण्डमा को कोठा उचाइ पर्खाल बाट कम्तिमा2मिटर हुनुपर्छ -। छैन भन्दा कम चरा लागि 1.7 मिटर आलसी र भवन को एक दक्षिणी वा दक्षिण-पूर्वी पक्ष संग एक विन्डो। छत को वर्षा देखि चरा रक्षा गर्नुपर्छ।
अस्वीकार्य भन्दा-crowding यो कोठा मा चरा को फोहोर, microflora को भङ्ग microclimate तीव्र गुणन कलहंस एक वृद्धि घटना निम्त्याउँछ हुन्छ। कलहंस कोठा उजाला भन्दा बढी सूर्य गर्न, दक्षिण मोहरा निर्माण र लागि देशको सुविधाहरु को उत्तरी र मध्य क्षेत्रमा त्यहाँ सौर विकिरण, एक अतिरिक्त हो जहाँ दक्षिणी क्षेत्र, मा - दक्षिण-पश्चिम वा दक्षिण-पूर्वी।
स्वास्थ्य र राम्रो-हुनुको कलहंस एउटा विशाल प्रभाव तापमान र चिस्यान निर्भर राज्य जो फोहर फाल्न, दर्साउँछ। sawdust, shavings, पराल, sphagnum पीट, भूमि मकै cobs, सूर्यमुखी भूसी वा कोदो: को फोहर फाल्न सामाग्री को एक विस्तृत श्रृंखला प्रयोग गरिन्छ रूपमा। बिस्तर, शुष्क सफा, hygroscopic, मुक्त मोल्ड देखि हुनुपर्छ। बोट सामाग्री देखि फोहर फाल्न, आफ्नो स्वच्छ बाहेक, तल्ला warms। शरद ऋतु र हिउँदमा, न्यानो बिछ्यौना प्रयोग - पराल, पीट; मा गर्मिहरु - बालुवा र sawdust। प्रति वर्ष आवश्यकता वयस्क goose फोहर फाल्न सामाग्री को 40 किलो तयार।
अनुपयुक्त सामग्री कलहंस कच्चा फोहर फाल्न - यस मामला प्वाँख, फोहोर disheveled, र खराब हुन्छ गर्मी पनि कायम रहन्छ। यो संग जडान मा फिड उत्पादक प्रयोग सर्दी निम्त्याउँछ शरीरको प्रतिरोध, कम छ deteriorates। यो शुद्ध कलहंस पंख hypothermia देखि सुरक्षा सम्झना गर्नुपर्छ। चिसो को शुरू संग, गहिरो फोहर फाल्न बिछाउने अघि, मनमोहक ड्राई तल्ला प्रति 1 वर्ग 0.5-1 किलो को दर मा slaked कागती वा hydrated कागती छिडकना छ। एम वर्ग। त्यसपछि टीन र सकेट, सेट शीर्ष रुचाउने सानो चिप्स, चोट मकै cobs, sawdust एक बिस्तर,5भन्दा कम को कटा पराल मोटाइ र 15 भन्दा बढी सेमी राख्नु।। गहिरो फोहर फाल्न परिवर्तन तपाईं पार्टी कलहंस वा सिजन (पतन वा वसन्त) परिवर्तन गर्दा।
कम तापमान, विशेष गरी प्रजनन सिजन मा, नाटकीय कलहंस बिछाउने अन्डा कम गर्न सक्छ, तापमान तल गिर हुँदैन -4-5 ° सी कम तापमान किनभने चिसो को अन्डा को घट्यो hatchability हुन सक्छ।
स्पेस मा एक अन्डा कोठा मा, एक महिना भन्दा कुनै पछि 2-3 कलहंस लागि एक गुँड को दरमा पर्खाल सकेट साथ सेट Lay को शुरू, अघि बोक्न प्रयोग हांस गर्न। संग कलहंस आफ्नो कमी एकांत ठाउँमा लगे गर्न सकिन्छ। को सकेट Gusyatnikov जस्तै, एउटै फोहर फाल्न प्रयोग गर्नुहोस्। कलहंस बिहान भागने भएकोले अन्डा को दूषण जोगिन गर्न, गुँड मा फोहर फाल्न साँझ spiked गर्नुपर्छ। यो चिसो पर्खालहरु विरुद्ध र उज्ज्वल प्रत्यक्ष प्रकाश संग ठाउँमा गुँड राख्न सिफारिस गरिएको छैन। रूपमा निम्नानुसार को गुँड को भित्री आयाम छन् :. चौडाइ - 0.4-0.5 मिटर, लम्बाइ 0.65 मिटर, उचाइ - 0.6-0.65 पु, नट उचाइ - 0.01 मिटर गुँड काठ, प्लाईवुड, वा अन्य बनेको तिनीहरूले मर्मतका लागि पहुँच योग्य छन् भनेर माल र अवस्थित।
कलहंस लागि feeders फिड को एक ठूलो हानि जोगिन गर्छन। तिनीहरूले, प्रकाश सहज हुनुपर्छ। तिनीहरूले planks, प्लाईवुड वा अन्य सामाग्री को सकिँदैन। Feeders कलहंस को खुवाउने बेला प्रयास बच्न पर्याप्त हुनुपर्छ। रोडा, चूना पत्थर, गोले: खनिज additives को लागि धेरै compartments संग feeders प्रयोग। Feeders तल्ला देखि 20 सेमी को एक उचाइ मा हङ। हरियो ठूलो खुवाउने लागि गर्त toddlers प्रकार बनेको छ। सबै उपकरण सधैं सफा हुनुपर्छ।
पीने अन्तर्गत वयस्क कलहंस troughs, बाल्टिन वा अन्य कन्टेनर प्रयोग गर्नुहोस्। पानी स्प्रे troughs ट्रे मा माउन्ट, काठ नेट वा धातु ढाकिएको रोक्न। को हिउँदमा पानी स्थिर छैन भनेर, गर्त पृथक वा समय समयमा तातो पानी मा हालिएको। चरा को एउटा ठूलो रोग अग्रणी विशेष गरी तातो मौसममा पानी अभाव,।
Aviary निर्माण को दक्षिण पक्षमा सेट गरिएको छ, यो सूर्य र वर्षा देखि canopies हुनुपर्छ। स्नान कलहंस समय समयमा स्थिर स्तरमा पानी थप्दा, उपयुक्त कन्टेनर समायोजित। प्रति चरा क्षेत्र कम्तिमा 1 वर्ग हुनुपर्छ। एम - कलहंस,5वर्ग को लागि। एम - युवा जनावर, 15 वर्ग को लागि। वयस्क -for m। भीडभाड चरा कोठा फोहोर हुन्छ जब हावा शासन, कलहंस को ठूलो रोग उत्पन्न हुन सक्छ जो worsens। तर एकै समयमा रोपण घनत्व को दर climatic अवस्था मा निर्भर गर्दछ। जहाँ चरा दिन को सबै भन्दा बिताउनुहुन्छ सानो खेत मा दक्षिणी क्षेत्रहरू, मा, रोपण घनत्व गर्न 2.5 वृद्धि गर्न सकिन्छ 1 वर्ग टाउको प्रति। घर तल्ला को पु क्षेत्र।
न्यानो मौसम लागि 15-50 कलहंस को मर्मतका लागि प्रकार facilitated मोबाइल घरमा संग सुसज्जित गर्न सकिन्छ। घर को फ्रेम बारहरू वा कुना पर्खाल sheathe बोर्ड वा प्लाईवुड, काठ काष्ठफलक फर्श, छत प्लाईवुड वा बोर्डहरू ढाकिएको बनेको छ। धेरै सरल पुरानो कुखुरा घर जाल, टार कागज र फिल्म बनेको गर्न सकिन्छ। बारहरू वा बोर्डहरू बनेको फ्रेम, यो छत महसुस भन्दा स्थिर ग्रिड र reinforcing जाल, वा फिलिम छ। छत बारेमा 0.3 मीटर को एक अंतर therebetween संग, छड बनेको छ, माथि छत सामाग्री वा फिलिम ढाकिएको छ। 2.5 x 2.5 मिटर, pent छत, को मोहरा उचाइ - - 2.1 मिटर पछाडि पर्खाल -। 15 कलहंस लागि घर आकार छैन 1.4 भन्दा कम पु feeders, पीने र गुँड पोर्टेबल बनाउन आवश्यक र माउन्ट देशमा प्रदूषित छैन। अघिल्लो एक जस्तै बाटो निर्माण अर्ध-खुला पुरानो aviary मात्र बारे 0.6 को एक उचाइ गर्न बोर्डहरू संग मोहरा बन्द छ, र तल्ला देखि, र माथि - राम्रो-जाल नेट। को कलहंस बाहिर राखिन्छ किनभने यो aviary को गर्मी मा, धेरै सजिलो छ।
चराहरूले को शारीरिक अवस्था एकदम molting प्रभावित छ। दैनिक goslings तल ढाकिएको छन्। उमेर3सप्ताह मा, goslings fuzz प्राथमिक कलम बदलिएको गर्न सुरु, र 10-हप्तामा पुरानो किशोर पर्णपतन हुन्छ। यो समयमा जवान वृद्धि दर प्रति वृद्धि बढ्छ को एकाइ फिड खपत घट्यो। "सन" नयाँ पंख को चरा rudiments को शरीर मा गठन प्रक्रिया समयमा शवों हटाउन गाह्रो हो, त्यसैले यो किशोर पर्णपतन अघि वा यसको पूरा गरेपछि मासु लागि कलहंस मार्न उचित छ। गर्मी र शरद ऋतु मा - उमेर4महिना गरेर, जवान कलहंस पूर्णतया एक वयस्क चरा को कलम द्वारा कवर गर्दै छन्, कलहंस त्यसपछि प्रति वर्ष2पटक molt। मई मा वसन्त प्रजनन सिजन अन्त मा - अन्डा-बिछाउने ceases को जुन, Gusakov मा शुक्राणुजन तीव्रता घट्छ, शरीरको वजन 20-30% घट्यो छन्। गर्मी मा लगभग2महिना, पूर्ण सबै पंख प्रतिस्थापित जुन बेलामा कलहंस पर्णपतन, आउँछ। तर, पहिलो moulting कलहंस पछि3सप्ताह पछि दोस्रो पटक प्रारम्भिक शरद ऋतु मा moult र परिवर्तनहरू सबै पंख, र "केवल सानो र मध्यम कलम छैन।
एक हांस लास संग fluff को 50-60 ग्राम सहित 250-300 ग्राम पेन मा हटाइएको छ। पंख र कलहंस को तल सबैभन्दा न्यानो र राम्रो हो। यो 20-30% सेतो भन्दा सस्ता मा अनुमानित हांस पंख खैरो जस्तो सेतो पक्षति संग कलहंस प्रकार गर्न बेहतर छ। अर्डर हांस पंख र तल को संग्रह वृद्धि गर्न, यो दुई-समय (न्यानो मौसममा) intravital Oschipko कलहंस र दक्षिणी 3rd समसामयिक र सही आंशिक Oschipko कलहंस मा पूरा गर्न लगभग2समयमा सानो पंख को उत्पादन र तल बढाउन सक्छ सम्भव छ। विकास कुखुरा संग धेरै देशहरूमा समय गर्न पंख प्राकृतिक molting चरा उमेर, शारीरिक अवस्था तोड वर्ष समयमा दुई पटक बाहिर छ। दक्ष Oschipko दुखाइ कलहंस कारण छैन। यस मामला मात्र कलहंस तल बांधन र शरीर coverts को सानो पंख।
हांस 3-4 - कलहंस मा स्पष्ट एक हांस आधारित स्थिर जोडे स्थापना गर्न इच्छा, त्यसैले प्रजनन सिजन पहिला उत्पादन को Gusakov वितरण व्यक्त। युवा Gusakov लोड कम छ। बगालका कलहंस प्रयोग अवधिको नस्ल र राखे अन्डा को संख्या मा निर्भर गर्दछ। कम अन्डा उत्पादन र भण्डारण अन्त अन्डा कोरलिँदै संग जातिहरु prolific 5-6 वर्ष हो। उच्च अन्डा उत्पादन र भारी नस्ल उर्वर 3-4 वर्ष संग geese। राम्रो को अवधि प्रयोग, सिद्ध Gusakov 10-12 वर्ष सम्म बढाउन सक्छ।
को खण्ड मा राम्रो गानडर दुई साना पंख (कैंची) र पहिलो र दोस्रो आदेश, एउटै माथिल्लो र तल्लो पुच्छर पंख स्टीयरिंग गर्नुपर्छ दस प्राथमिक पंख छन्। युवा उत्पादन हदसम्म यौन गतिविधि Gusakov मा निर्भर गर्दछ। को प्रजनन सिजन (फरवरी जुन) Gussaki को सुरुमा सक्रिय अन्त सम्म सक्रिय रहने। यसबाहेक, यौन गतिविधि Gusakov दोस्रो र तेस्रो वर्ष बढाउन सक्छ मा, खातामा लग्नु गर्नुपर्छ।
यो inbreeding फलस्वरूप बथानलाई को degeneration जोगिन गर्न inbreeding बच्न महत्त्वपूर्ण छ। जहाँ पार मा, शुद्ध प्रजनन प्रयोग नगर्नुहोस् व्यापार को ठूलो अभिव्यक्ति एउटा संकर जवानहरूले प्राप्त गर्न सक्छन् - उपयोगी संकेत।
आफ्नो खेत अन्यथा Gussaki लड्न सक्नुहुन्छ, यो फरक barns र सानो खेत मा परिवार राख्न मनमोहक छ भनेर जान्नुपर्छ दुई वा बढी सकेट परिवार द्वारा राख्न इच्छा। को प्रजनन सिजन मा Gussaki केही दिन अन्य Gusakov देखि आफ्नो महिलाहरुको रखवाली, भोक रहने सक्छ।
अन्डा बिछाउने कलहंस - प्रति वर्ष 10 50 अन्डा देखि। मुख्यतया प्रकाश कलहंस प्रजाति उमेर, मात्र9महिना संग प्रकार तयार भारी रक को6महिना मा यौन परिपक्वता पुग्न। वजन हांस अन्डा छ 150 देखि 190g (औसत 170g) गर्न। गहन अन्डा उत्पादन 3,5-9 महिना जारी छ। 28-30 दिन - हांस अन्डा को गर्मी चालू को अवधि।
प्रजनन कलहंस प्रभावित: हावा तापमान, दिन र रात को अनुक्रम, डेलाईट को अवधि। प्रकाश बढावा: विकास र कुखुरा को विकास, परिपक्वता, molting, अन्डा उत्पादन को शुरुवात अन्डा उत्पादन को अन्त मा एक प्रभाव छ।
लामो डेलाइट यौवन अवस्था चरा accelerates नकारात्मक खोल गुणस्तर र अन्डा ठूलो असर गर्छ। डेलाईट को लम्बाइ एक तेज कमी अकाल molting र अन्डा उत्पादन को समाप्ति हुन्छ।
साथै, Gusakov मा शुक्राणुजन को प्रजनन अवधि, सामान्यतया 1-2 हप्तापछि अन्डा-बिछाउने कलहंस भन्दा सुरु, त्यसैले पहिलो अन्डा सामान्यतया unfertilized बाँकी छन्। को अन्डा-बिछाउने कलहंस को सुरु गर्नु अघि बारे 7-10 दिनमा थाले जो, 8 14 घण्टा देखि डेलाइट घण्टा को लम्बाइ मा वृद्धि प्रजनन मौसमको सुरुवातमा accelerates तयारी Gusakov।
सामान्य परिस्थितिमा, जब डेलाईट लेट फेब्रुअरी वा प्रारम्भिक मार्च मा कलहंस सहन गर्न थाल्छ। तपाईंलाई जनवरी Gusyatnikov, अर्थात् एक अधिकतम microclimate सिर्जना भने फेब्रुअरी सुरुमा - आवश्यक छ भने, तपाईं जनवरी को अन्त को बिछाउने को सुरु मिति सार्न सक्नुहुन्छ प्रयोग गरेर परिसर 14 घण्टा माथि-शून्य तापमान र दिनको प्रकाश घण्टा वृद्धि कायम कृत्रिम प्रकाश। यसरी आफ्नो प्रजनन2पटक वृद्धि, अन्डा उत्पादन चक्र -। शरद - यस्तो शासन प्राकृतिक डेलाईट केही अवस्थामा 14 घण्टा बराबर छैन, हुनेछ कलहंस दोस्रो कारण लामो कायम गर्नुपर्छ।
पनि गरिब चरा कम्तिमा एक महिना पूरा गर्नेछ भनेर goose, दिन मार्फत हतार। त्यसैले, तपाईं बचेराहरूलाई प्राप्त गर्ने योजना भने, यो आवश्यक पनि 30-40 दिन ध्यान केन्द्रित छ। आवश्यक समय प्राथमिकताको चिप्स वा sawdust मा, यस गुँड बाट अन्डा हटाउन एक तह मा बक्से तिनीहरूलाई थुपार्नुहोस्। अन्डा गुँड राम्रो मार्क देखि संकलित - एक हांस र तोडफोड को मिति देखि। अन्डा सर्वश्रेष्ठ दैनिक नै दिशा मा बक्समा पक्ष गर्नाले, 7-13 ° C को एक तापमान मा एक गत्ता बक्स मा राखिन्छ। संग अन्डा यस्तो भण्डारण भ्रूण जीवित अब बाँकी छन्।
कसरी लामो इच्छा अन्डा? धेरै यो हांस, सामान्यतया 11-13 एकाइहरु गर्मी गर्न सक्छन्। ठूलो कलहंस अन्तर्गत सानो अन्तर्गत थप वरिपरि बार लाउनु - कम। यो एक स्त्री राम्रो sheltered अन्डा छ कि महत्त्वपूर्ण छ।
अब ठूलो प्रश्न: हांस कोरलिँदै अन्डा, को incubator नै विशेष गरी यदि आमा कुखुरी कसरी बनाउने? कोरल्ने एउटा संकेत - यो परिवेश तापमान वृद्धि गर्नुपर्छ। Gusyatnikov मा कम्तिमा अलिकति, गर्मी बारी हावा तापमान वृद्धि गर्न आवश्यक छ। जब हांस rassids, हीटर बन्द गर्न सकिन्छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण विवरण: को काग गरेको गुँड केवल एकपटक र सबै व्यवस्था गर्नुपर्छ, कि जहाँ हांस बाहिर त्यहाँ उड्यो छ र तिनीहरूले कोरलिँदै छ। पुरानो फोहर फाल्न परजीवी साथ जलाइएको हुनुपर्छ। गुँड, नयाँ फोहर फाल्न खन्याउन wormwood, को स्लट माथि ठूलो quill कलम बनाउन थप्न भूल छैन। जब सबै कलहंस गुँड मा बस्न, हामी तिनीहरूलाई 2-3 दिन rassidetsya दिनुहोस्। आवश्यक rassizhivaniya कम्तिमा दुई वा तीन अन्डा गुँड मा राख्नु लागि। गरिब गोले, पुरानो, आदि संग, अनियमित आकार को - यो गरिब गुणस्तर अन्डा को हुन सक्छ
गुँड पहिले नै झूट हावा तापमान मा वृद्धि, साथै अन्डा, को हांस बक्समा एक सानो अब Linger पछि अन्डा राख्नु हुनेछ भन्ने सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ। अन्डा पनि गुँड मा झूट छन् पालो मा brooding सहज क्रिया evokes जो हांस पेट, मा रिसेप्टर्स परेशान। तपाईंले यी अवस्था घरमा सिर्जना भने, परिणाम लामो लिन छैन। जब कस छ कि हांस rassids ती 2-3 अन्डा लगाए मा बस्न, तिनीहरूले गत्ता बक्से मा भण्डारण लागि राखिएको उच्च गुणस्तरीय अन्डा बदलिएको गर्न सकिन्छ। त्यो क्षण देखि यो गर्मी चालू को समय गणना शुरू गर्छ। अन्डा 13-15 पीसी को एक राम्रो रात राख्नु। प्रत्येक हांस बाहिर र भित्रका तापमान आधारमा कलहंस र अन्डा को मूल्य, अन्तर्गत तर आफ्नो शरीर पूर्ण लगाए अण्डा लुकेको goose गर्न।
हांस कोरलिँदै जब मुक्त साइट पिछवाडे मा वा SHED मा खुवाउन पहुँच र पानी हुनुपर्छ। रुचाउने समयमा गुँड सफा चोट अन्डा निरीक्षण। , गुँड र चलिरहेको कलहंस को अन्डा सफाई तिनीहरूले गलत स्लट पक्रेको छैन पक्का पछि। 5-7 - goslings, हांस-अन्डा को उपज भएको कुखुरी राम्रो ठाउँ अन्तर्गत optimally बिछाउने पछि पछि छैन 10-12 दिन भन्दा वृद्धि गर्न।
केही सबै एकै समयमा कोरलिँदै हांस पायो बनाउन प्रयास गर्नुहोस्। यो कलहंस साधारण बथानलाई ड्राइव थालेका छन् जो, कलहंस को पनि-वृद्ध broods लागि अनुमति दिन्छ। अरूलाई यसरी अन्डा को कुल संख्या वृद्धि, अन्डा संग्रह रूपमा सकेट Sitters गठन गर्ने रुचि र विशेष आफ्नो जीवन को अन्डा कोरलिँदै लागि उपयुक्त गरे।
एक जवान हांस गाउँ कोरलिँदै भने, र त्यसपछि उनको मा अन्त द्वारा decayed र त्यो गुँड बायाँ, यो खारेज गर्न हतार छैन। अर्को वर्ष, सायद यो एक राम्रो आमा कुखुरी हुनेछ, र अन्डा को हांस को दोस्रो वर्ष 15-20% जवान बढी छन्। "प्रतिभा" brooding कलहंस जन्मजात छन्। त्यसैले, पनि एक असल स्त्री पहिचान, तपाईं सधैं हांस को छोरी कुलका छोडेर आफ्नो नम्बर वृद्धि गर्न सक्षम हुनेछ। र उचित हेरविचार राम्रो कुखुरी केही वर्ष तपाईं वफादार भई सेवा गर्नेछन्।
तातो पानी संग एक कचौरा मा राखिएको यस कलहंस देखि अन्डा को निकासी अघि पछिल्लो7दिन (35-40 ° C) तिनीहरूले खुलेर फ्लोट भनेर, एक बेला पछि जीवित goslings संग अन्डा wobble सुरु भने। चयन प्रत्यक्ष अन्डा समान रूप ले कलहंस अन्तर्गत बाहिर फैलियो। 28, केही पानी स्प्रे संग अन्डा सुझाव दिन्छौं। 28 - - 29 मिनेट, र 30-31 दिन - पूर्ण brood प्रकाश कलहंस मा पिप ठूलो जातिहरु मा, मा गर्मी चालू को 27 दिन सुरु गर्न उक्साउँछ।
कोठा चिसो छ भने, गर्मी चालू समय 30 दिन म्याद थप हुन सक्छ, पिप र उत्पादन एक दिन मात्र 31 मिनेट सुरु छ। परिवेश तापमान को चरा को जीवन मा एक धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
लिन goslings घर छोड्न वा आमा अन्तर्गत हुनेछन्: अब तपाईं निर्णय गर्न आवश्यक छ।
को कुखुरी भारी र भद्दा छ र बचेराहरूलाई, disjointed छ देखा भने, एक पहिले नै सुकेको थियो, पुरा दिन सक्रिय जीवन शैली नेतृत्व, र केही अन्डा अझै चरा मुनि झूठ, यो निश्चित गर्न पहिलो आवश्यक छ कि खोल प्रत्यक्ष बचेराहरूलाई अन्तर्गत बाँकी अन्डा तल पानी मा, यदि तिनीहरू जीवित रूपमा व्यवहार गर्न उत्प्रेरित गर्न, छ। तिनीहरूले बन्द सुक्खामा पछि, यो घर टिप्न सबै भन्दा राम्रो छ, goslings नै Hatched। गतिविधि hatchlings साना दबाउन छैन ताकि गुँड भन्दा उठाएर हांस बनाउँछ र गर्दा पक्कै पनि सुन्दर, अण्डा मा अझै पनि छन् कि भन्ने पनि मर्न सक्छ। बचेराहरूलाई राम्रो कार्डबोर्ड बक्स, 30 ° C को तापमान र बाँकी उत्पादन लागि प्रतीक्षा जहाँ मा, न्यानो राखे। कमजोर gusjat को ताप बक्स जहाँ तापमान 35 ° C मा पहिले नै कायम छ राख्नुभयो। Goslings रात कलहंस पखेटामुनि उत्तिकै राखिएको मा बलियो भयो। Goslings अलग आफ्नो मां देखि लामो राख्न सक्दैन - एक व्यक्ति accustomed, तिनीहरूले छैन हांस गर्न उपयुक्त छन्। आमा को व्यवहार हेर्दै, हांस goslings गर्न स्वीकार। रात goslings महारत र हांस भन्दा वितरण अघि। तिनीहरूलाई को एक द्वारा भने, तिनीहरू चयन र अन्य कलहंस को खण्ड अन्तर्गत राखिएको धेरै goslings पूरा हुनेछ। भविष्यमा, यो सबै कलहंस र गानडर को सुरक्षा अन्तर्गत बगालको एक chorus हुनेछ।
खैर, आफ्नो कुखुरी ध्यान र कौशलतासाथ गुँड मा व्यवहार भने तपाईँले चिन्ता हुँदैन - कुनै एक चल्ला भूल गरिने वा आमा माथि चुप। यस समयमा तपाईं मात्र goslings गुँड छोडेर फर्केर जान मुक्त थिए भनेर पक्का हुनेछ। यो गर्न, तिनीहरूलाई उपलब्ध स्लट उत्पादन र इनपुट व्यवस्था। गुँड नजिक दृष्टि फोहर फाल्न भित्र, तपाईं आफ्नो आमा को लागि पानी को पानी कचौरा र बच्चाहरु को लागि खाना संग एक खोक्रो ट्रे, एक अन्न र एक बाल्टिन राख्नु आवश्यक छ। बाल्टिन - goslings पानी संग कन्टेनर मा प्राप्त र यो मा डुबा सकेन।
राम्रो हांस मनसायलाई बच्चाहरु heats को समय मा खानाको पछि स्लट मा summoning अनुगमन। गुँड, एक हप्ताको लागि बाँकी हुनुपर्छ, त्यसपछि हटाइएको र सुक्खा पराल को ठूलो armload फेंक यसको ठाउँमा। Brood ठूलो खुशी साथ सफा सतह मा राखिनेछ। यसलाई पहिले नै न्यानो छ भने, आमा संग goslings घाँस मा एकैचोटि बित्तिकै तिनीहरू विश्वस्त आफ्नो खुट्टा मा खडा रूपमा discharged गर्न सकिन्छ। केही कलहंस, त्यसपछि साधारण खर्क बाहिर ड्राइव भने मात्र आमा पछि सम्भव छ र छोराछोरीलाई राम्रो प्रत्येक अन्य सम्झना छन्। किनभने कहिलेकाहीं गल्ति goslings अरू कसैको आमा सम्म न्यानो चढ्नुहोस् गर्न सक्नुहुन्छ। को हांस केही, पनि सानो goslings चोट लाग्नु सक्नुहुन्छ अपरिचित बचेराहरूलाई तिर आक्रामक व्यवहार छ।
Goslings जीवनको पहिलो महिना मा एक विशेष तीव्र वृद्धि संग, विकास एक उच्च तीव्रता छ।2किलो भन्दा बढी - दिन पुरानो कलहंस 30-दिनमा 100-120 ग्राम वजन, बस्नुहुन्छ भने। 60-70 दिन राम्रो बढ्दै goslings अन्तर्गत लागि खुवाउने र, 4-4.5 किलो पुगन 35-40 कहिलेकाहीं आफ्नो प्रारम्भिक शरीरको वजन बढ्छ।
त्यहाँ गानडर हुनुपर्छ यो मामला मा जहाँ दुई contrasting दृश्य हो। केही गर्मी चालू र उत्पादन बच्चाहरु Gusakov समयमा राम्रो goose कि राख्न टाढा विश्वास गर्छन्। एक शान्त, न्यानो, घाम मौसम आफ्नो आमा संग जवान मा उहाँले व्यवहार कसरी हेर्दै, को घाम मा "sunbathe" गर्न लन बाहिर गरौं र गानडर नजिकै दिनुभयो। अरूलाई जब हांस, अन्डा बसिरहेका तिनीहरूले कहिल्यै उहाँले गर्दैन भनेर विश्वास फरक स्थानमा हांस अनुवाद छैन र यो धेरै भावुक छ। बचेराहरूलाई को चीची गर्नु सुनेपछि, यो सकेट मा फिट, उनको टाउको भित्र pokes, रुचि, त्यो goslings offends कहिल्यै। को हांस goslings संग गुँड बाट निस्कनु गर्न सुरु गर्दा धेरै खुसी।
कलहंस को प्रत्यक्ष वजन, एक उच्च आनुवंशिक variability छ हाथ तल राम्रो छ। इच्छित भने, एकदम सफलतापूर्वक कलहंस को प्रत्यक्ष वजन बढाउन सक्छ Gusevod, तिनीहरूलाई नस्ल गर्मी चालू ठूलो अन्डा लागि चयन र कलहंस को एक ठूलो कुलको छोडेर। ठूलो अन्डा ठूलो diurnal goslings प्रदर्शित हुनेछ देखि जो देखि ठूलो युवा कलहंस बढ्नेछ। gusevod आफ्नो प्रजनन बथानलाई पूरा हुनेछ भने, तिनीहरूले यति मा ठूलो अन्डा हुनेछ, र। फलस्वरूप, प्रजनन कलहंस को प्रत्यक्ष वजन चाँडै उठ्नेछ। अन्डा उत्पादन, प्रजनन र अन्डा को hatchability: तर, यो दिइएको बथानलाई प्रजनन मा एकै समयमा पर्याप्त चरा कम हुनेछ भनेर मनमा सार्ने गर्नुपर्छ। यो कुखुरा को शरीरको वजन र यसको प्रजनन बीच प्रतिक्रिया जैविक सम्बन्ध कारण छ: अन्डा उत्पादन, प्रजनन र अन्डा को hatchability, त्यसैले dilution Ptitsevod कलहंस उच्च प्रजनन र पूर्ण प्रजनकों उपयुक्त आकार जवान व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति रोक्न गर्दैन farmed कुखुरा, को सर्वोत्कृष्ट शरीरको वजन चयन गर्नुहोस्। यसलाई उच्च अन्डा उत्पादन र Gusakov उच्च यौन गतिविधि संग संग कलहंस अलग्गै परिवार छोड्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
goslings उत्पादन गर्न प्रयोग कलहंस सबै अन्डा, त्यसैले आफ्नो प्रजनन र गर्नुपर्छ hatchability सबै हालतमा एक उच्च तहमा कायम गर्न। पूर्ण कोरलिँदै अन्डा प्राप्त गर्न, कलहंस विशेष प्रोटीन र भिटामिन मा, सबै पोषक तत्व intakes मा सन्तुलित हुनुपर्छ खुवाउन।
Goose - बर्ड खर्क, herbivorous। Geese स्वेच्छाले ताजा घाँस ठूलो रकम उपभोग र खर्क खाना को सस्ता स्रोत हो। चराई र पानी प्रयोग गरेर समग्र जीव कलहंस सकारात्मक प्रभाव छ। तिनीहरूले हरियो ठूलो को2किलो गर्न एक दिन खान सक्षम छन्। खर्क मा वयस्क कलहंस oviposition पछि तुरुन्तै उत्पादन। चराई कलहंस बाढी र सुख्खा Meadows र ravines प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ खर्क गर्न कलहंस जारी को कुनै सम्भावना छ जहाँ तिनीहरूले कलम मा राखिन्छ।
, शुष्क भिजेको र संयुक्त: त्यहाँ कलहंस खुवाउने तीन तरिकाहरू छन्।
सूखी प्रकार रुचाउने चरा सुख्खा हुन्छ, वा pelleted फिड मिश्रित फिड, वा अन्न मिश्रण को निर्वाचकगण। रुचाउने यो विधि भिटामिन-खनिज पूरक फिड मिश्रण संग आहार को पूर्ण मर्मतका र संवर्धन आवश्यक छ। यसको दैनिक दर सेट गर्न सकिन्छ एक समय - यो इन्धन ट्यांक स्वचालित feeders मार्फत बिहान, क्षति को डर बिना। रुचाउने comminuted केंद्रित फिड पानी moistened, दुग्ध प्रशोधन, एक तरल खाना को remnants, भान्सा फोहोर, कटा रसदार चारा, मासु र माछा washings को भिजेको विधि मा। को moistened फिड (Mash) सजिलै गर्मी मा acidification गर्न subjected र हिउँदमा चिसो छ। त्यसैले, तिनीहरू केवल खुवाउने अघि फिडर बाहिर राखिएको छन्। संयुक्त विधि आहार दुवै सुक्खा र फिड देखि नम हुन्छन् मा, सुकेको पाल्तु जनावर खाना लगातार भिजेको प्रति दिन एक वा दुई पटक वितरण अलग feeders मा हुन सक्छ।
चारा - खुली र विभिन्न feedstuffs र microadditives पूर्ण रुचाउने चरा प्रदान आवश्यक आकार चोट को एक जटिल homogeneous मिश्रण छ।
पूर्ण फिड (पीसी) र छाडा granulated फारम, फिड केंद्रित र फिड-ग्रिट उत्पादन। पीसी - पूर्णतया थप रुचाउने र अन्य फिड microadditives (तालिका 1) बिना ऊर्जा कुखुरा, पोषक तत्व र biologically सक्रिय यौगिकों प्रदान गर्ने एक मिश्रण।
दानेदार फिड चरा पशु फिड व्यक्तिगत कणहरु चयन गर्न सक्षम छैन, परिवहन र वितरण समयमा अलग छैन, फिड ब्यालेन्स यो कारण धूलो को फैलिएको र यांत्रिक घाटा कम गर्छ, छैन विचलित छ। को granules राम्रो biologically सक्रिय पदार्थ, विशेष गरी carotene, भिटामिन संरक्षित छन्; कणांकुरण प्रक्रियामा कारण दबाव र तापमान बढ्छ पोषक तत्व digestibility र केही पतन inhibitors (एजेन्ट digestibility कम जो) प्रोटिनको गर्न।
चारा सार्थक microaddings - premixes।
अन्न अनाज फिड कलहंस मात्र गहन fattening समयमा आहार को एक प्रमुख भाग कब्जा। कुखुरा infield अवस्था मकै प्रयोग गहुँ, जौ, जई, कोदो, sorghum कोदो, राई, अनाज groats र अनाज बर्बाद अवशेष (तालिका 2) मा।
Geese राम्रो जो आफ्नो आवश्यकता पूरा कारण पोषक, हरियो succulent र भद्दा चारा अवशोषित गर्न सक्षम छन्। दिन दौरान, हांस2किलो खान सक्षम, र थप हरियो घाँस, पोषक र भिटामिन आफ्नो शरीर को एक महत्वपूर्ण भाग को आवश्यकता पूरा जो छ। लेट शरद ऋतु मा, जाडो र प्रारम्भिक वसन्त कलहंस राम्रो घास भोजन को 300 ग्राम एक दिन सम्म उत्पादन। यसलाई जो beneficially अन्डा मा भिटामिन सामग्री र दैनिक goslings गुणस्तर असर गर्छ, राम्रो पचा लिया जान्छ। हरियो चराई मा कलहंस चराई प्रति विकास एकाइ एकाग्रचित्त फिड को2पटक लागत कम बाहेक, श्रम लागत र मासु को लागत कम। सक्रिय प्रयोग गर्न सकिन्छ र यस्तो particulate फारम, प्रति टाउको 200 G मा कोदो वा जई Mash मा मकै cobs रूपमा भारी खाना। यदि तिनीहरूले एकाग्रचित्त चारा चुकंदर र उबला आलु को वाहेक संग स्वादिष्ट छन् खपत कलहंस ड्राई roughage सबै भन्दा राम्रो र बढि छ। Geese राम्रो फाइबर जौ, जई, मटर पचा लिया जान्छ छन्। सामान्यतया सस्ता फाइबर, एक उच्च सामग्री संग फिड देखि, यो लागत र कुखुरा खुवाउने लागत कम गर्छ। को gizzard कलहंस त्यहाँ को ठूलो रकम एक यांत्रिक पीस छ। यो सम्भव छ यदि सक्छ एक समयमा 30 टुक्रा हुन जो सानो पत्थर को पेट। यसबाहेक, cleaved मुख्य रूप बोट भागहरु फाइबर मा धनी विभिन्न सूक्ष्मजीवहरु को एक परिणाम रूपमा अन्धो आन्द्रा। बोसो खाना प्रवेश को Assimilation, एकदम कुखुरा अन्य प्रजाति मा दर भन्दा उच्च 45-55%, को दायरामा कलहंस।
कलहंस लागि फिड तालिका 1 संगठन
Feedstuff कम प्रोटिन सामग्री
जई वा कोदो
कुखुरा, गाजर, स्क्वास, चीनी चुकंदर, आलु, बन्दागोभी, फलियां, घास र forbs गर्न खुवाउनुभयो succulent र हरियो चारा silage देखि। Roughage (घास, घाँस भोजन र रद्दी, पात) हरियो रूपमा चारा भिटामिन मा धनी। दैनिक दर चरा प्रकार र उमेर मा निर्भर गर्दछ।
को को कलहंस अलग feeders देखि खुवाइन्छ रूपमा ताजा mowed र धुलो मा हरियो ठूलो - आहार को 40-50% को राशि मा Mash थपिएको छ। Geese रंग र खाद्य को गन्ध ध्यान। तिनीहरूले हरियो forage अझ सहयोग गर्दै छन्, राम्रो तरिकाले लगातार पात ब्लेड संग बिरुवाहरु खान: जलीय बिरुवाहरु को horsetail र गाजर भन्दा माथि - duckweed। गहुँ घाँस जस्तै अनाज देखि, ब्लूग्रास, मीडो जवान जई र राई; फलियां - alfalfa र क्लोभर।
Geese धेरै keen दृष्टि छ, त्यसैले तिनीहरू अन्धकारमा खाना खान सक्छन्। रात मा, विशेष गरी प्रारम्भ मा, तिनीहरूले बढी खाद्य विशेष गरी प्रजनन सिजन मा खाना जो धेरै महत्वपूर्ण छ, रात मा feeders मा छोड्न त gusevody, को दिन मा भन्दा उपभोग गर्न, सक्षम छन्।
फिड कलहंस तालिका2अनुमानित स्तर आवश्यकताहरू (प्रति प्रति दिन टाउको G)
घाँस भोजन, घास, silage
बीट, गाजर, आलु
खोल, चक, चूना
Geese मीठो फिड रुचाउँछु। यो एक मूल्य र कार्बोहाइड्रेट को एकाग्रता छ। 1.5 र 3% को फ्रैक्टोज एकाग्रता अस्वीकार, तिनीहरूले 10- र 20-प्रतिशत समाधान अस्वीकार छैन। एक कम क्यालोरी आहार संग appetizing चरा बढी खाद्य मीठा खपत।
Brewer गरेको अन्न कलहंस प्रति दिन 30-35 ग्राम खुवाउनुभयो। खमीर सुक्खा रोटी गरेको र brewer जीवनको पाँचौं दिन देखि जवानहरूले को आहार मा शुरू हुन सक्छ। ड्राई चुकंदर मज्जा को एकाग्रचित्त चारा को वजन द्वारा 10% मा सेट गर्न सकिन्छ।
पशु प्रयोग फिड मासु, मासु र हड्डी, माछा र रगत भोजन, दूध पाउडर, मक्खन र झिकिएको दुध, माछा र मासु बिस्कुट, ताजा रगत, पशु खाने को नालायक बोसो देखि। सूखी पशु फिड फिड को 7% भन्दा बढी हुँदैन।
रुचाउने को आधारमा बाहिर र अनुकूल फिड तैयारी, खाने लागि उनलाई थप पहुँचयोग्य बनाउन छ, यो digestibility र assimilability सुधार गर्छ।
माटो बाट purified खुवाउने अघि मूल बाली, धोए र चोट। फीड अन्नको भाग पनि milled छ। पाचन पर्चा र रस को mucosa संग सम्पर्क सतह वृद्धि गरी पाचन र उपयोग गर्न यसको पोषक थप पहुँचयोग्य अनाज क्रशिंग गर्दा। यसबाहेक, राम्रो आहार घटक प्रत्येक अन्य संग मिश्रित गर्दै छन्।
निर्धक्क भई साहसका साथ चराहरूले प्रकार र उमेर मा निर्भर गर्दछ। 1 1.8 मिमी ठूलो - - राम्रो पीस - 0.2 मिमि औसत 1.8-2.8 मिमी: त्यहाँ पीस निम्न भिन्न हो। वयस्क चरा एक ठूलो अंश (औसत) पीस दिन मनमोहक, जवानहरूले
कुकुरको खोर "द Tsar गरेको idyll": कुकुर नस्लों, puppies, समीक्षा को विवरण
सेप्टिक ट्यांक "Evrobion": समीक्षा, स्थापना र को सुविधाहरू
प्रतीक राम्रो स्वाद Preciosa झाड
"स्ट्रिप आनन्द": अभिनेता र चलचित्र
छाला मा सेतो स्थलहरू